Mashiinka dhismaha Beeraha oo wata booyad bamgare ah oo 58 mitir ah
4-tii Sebtember, 15-kii BICES 2019 mashiinada dhismaha, mashiinada qalabka wax lagu dhisayo iyo mashiinada macdanta qodista iyo shirkii is weydaarsiga farsamada ayaa ka furmay magaalada Beijing bandhig cusub oo heer qaran ah, halkaas oo soosaarayaal fara badan ay isugu yimaadeen.
Mashiinada dhismaha ee Beeraha ayaa la soo muuqday gaari xamuul oo cusub oo 58 mitir ah.
Gawaarida la taaban karo ee mitir 58 mitir ayaa adeegsaday 6rz boom, taasoo ka dhigtay waxqabadka mid xasilloon, waxqabadka dhismaha wuxuu kordhay 20%, xoojinta shaqaaluhuna aad bay u yareeyeen.
Dib-u-eegista bices2017, Shirkadda Changyuan ee Beeraha Dhismaha Co., Ltd. waxay qayb ka qaadatay carwada iyagoo wata gaari weyn oo qaada 37 mitir oo la taaban karo oo buundo keliya ah, wuxuuna ku guuleystay "Abaalmarinta dahabka ah" ee alaabada hal-abuurka ah ee mashiinnada dhismaha ee BICES, taasoo si weyn loogu amaanay dhammaan socodsiinta nolosha.
Bandhigan, dhismaha beeraha wax badan ayaa laga goostay, macaamiishana waxay saxeexeen heshiisyo gadasho baabuur goobta.
Si loogu celiyo macaamiishii hore iyo kuwii cusbaa, ayaa shirkadda dhismaha beeraha waxay bilaabeen howlo doorbidid gaar ah intii lagu jiray carwada. Saddex maalmood gudahood, waxay saxiixday amarro 15 gawaarida matoorrada wadarta ah!
Faa'iidooyinka hawlgalka ku habboon, xasilloonida iyo heerka guuldarrooyinka hoose, baabuurta xamuulka ee la taaban karo ee mashiinnada dhismaha beeraha ayaa had iyo jeer ka helaa macaamiisha badankood. Mashiinada dhismaha ee Beeraha ayaa si aan kala go 'lahayn u qaadata macaamiisha sidii xarunta, waxay qaadataa "tayo qaadasho kalsooni culus, adeeg hagaajin suuq" sida falsafadda ganacsiga, waxay si isdaba joog ah u wanaajineysaa heerka cilmi baarista badeecada iyo horumarka, soosaarka iyo wax soo saarka iyo adeegga farsamada, waxayna u abuurtaa qiimo weyn macaamiisha.
1. Waqtiga lagu qeexay qandaraaska, u dir shaqaale waqtigeedu hagayo si ay u hagto rakibaadda iyo u xilsaaraynta;
2. Hal sano gudaheed kadib soo bixida badeecada, hadii ay dhibaato dhibaato ka jirto soo saarida alaabada, dayactirka waa in lagu sameeyaa;
3. Tababar loo siiyo shaqaalaha hawlgalka iyo dayactirka loogu talagalay isticmaaleyaasha;
4. Soo bandhig adeeg dayactir cimri dheer leh iyo qaybo ka mid ah alaabada la iibiyay;
5.2-24 saacadood waqti ku habboon, soo-saaruhu wuxuu si shuruud la’aan ah ugu xambaari karaa khasaaraha ay sababtay ku guul-darreysashada inuu si dhakhso leh wax uga qabto.